Global Voices teny Malagasy » Miaina Miaraka Amin’ny Fanantenana Fa Mbola Hiverina Indray Andro Any: Lehilahy Dominikàna Iray Ao Espaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2015 2:14 GMT 1	 · Mpanoratra Ana Hernández Nandika (en) i Diana Navarrete, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Eoropa Andrefana, Espaina, Repoblika Dominikana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka
Ity no voalohany amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy hafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Jesús Antonio García, mpandraharaha iray avy any amin'ny Repoblika Dominikàna ary monina ao Espaina. Navoaka voalohany tao amin'ny biloagin'i Ana  ity antsafa ity, ary ao amin'ny gazety an-tsoratra amin'ny teny Espaniola, El Crisol de Ciudad Real .
Trano iva sy mitokana. Tafo lanitra, mazava sy tsy misy manelingelina. Arabe rakotra tara sy feno olona, làla-mahitsy maresaka; talantàlana mameno ny arabe. Olona mividy, mivarotra, mikiakiaka isaky ny kihon-dàlana ao amin'ny araben'i Duarte sy Parisy, toerana nanaovan'ireo mpandihin'i Enrique Iglesias fampisehoana fotoana vitsy lasa izay ho an'ilay rakitsariny ‘Bailando ‘, noraketina tao afovoan'i Santo Domingo.
Fofona mifangaro, mahatonga ny lalaom-pamantarana ho sarotra: zavoka masaka, vary, tsaramaso sy zanaka omby maro. Ary 30 kilaometatra miala eo, Boca Chica , toerana natoraly fiatoana kely ao amin'ny morony atsimo amin'ilay nosy Hispaniola . “Tena tototra olona ireo arabe ao an-drenivohitry ny Repoblika Dominikàna” hoy i Jesus Antonio Garcia, avy ao Santo Domingo, ary miaina ao Ciudad Real any Espaina ankehitriny, toerana nahalalàna azy sy ny fandraharahàny tamin'ny hoe ‘Alfarero’ (mpanao tavy tanimanga).
Toy ireo filoha hafa rehetra ao Amerika Latina, mamporisika ny fandraharahàna madinika sy salantsalany i Danilo Medina . Mamatsy vola sy manome antoka ny governemanta, ary tsara izany. Indrindra fa ho an'ny fizahantany sy ny varotra, izay tena isian'ny fampiasàna vola, tanjaky ny hoavin'ny Repoblika Dominikàna.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/29/76053/
 biloagin'i Ana: https://hachesorda.wordpress.com/